I-intrahistory enomdla kwi-solar sphere ye-Apple Watch | Iindaba ze-iPhone
UMiguel Hernandez | 09/05/2022 18:00 | Apple Watch, Iimveliso ze-Apple
I-Apple Watch inobuninzi bamacandelo, kwaye ngokungathi oko akwanelanga, uninzi lwazo lunokwenziwa ngokwezifiso ukuya kwinqanaba lokudinwa. Andikhonzi njengomzekelo okanye ireferensi, kuba bendisebenzisa ubuso obufanayo be-Apple Watch ukusukela ngo-2016, kodwa oko akuthethi ukuba ndingamangaliswa emva koluhlu lweendlela ezikhethwa yinkampani yeCupertino kuthi.
Sikuxelela nge-intrahistory enomdla yendalo ye-Apple Watch, efihla iimfihlo ezininzi kunokuba ubunokucinga. Yifumanise nathi, ngubani owaziyo, mhlawumbi nawe uphele uyisebenzisa kumhla wakho.
Ukusukela oko yasungulwa ngo-2014, i-Apple inyuse ngokuphawulekayo inani leefowuni zokudayela ukuba iwotshi yayo ehlakaniphile, kwaye ke ngoko eyona nto idumileyo enxitywayo kwimbali, iyakwazi ukuboniswa. Ukusuka kumacandelo ayo ali-10 ukuya ngaphezulu kwe-31 kunye nokwenza ngokwezifiso okuhambelanayo esivumela ukuba sihlengahlengise, namhlanje kune imvula eninzi, kodwa ungakhathazeki, i-Apple Watch ayinamanzi.
Ngaphandle kwento yokuba uninzi lwazo lugxile ekunikezeni ulwazi oluphezulu olunokwenzeka kwindawo encinci, kukwakho i-redoubt encinci eshiyekileyo kwi-romantic ye-astronomy kunye nemizimba yasezulwini, yile nto ikuzise apha namhlanje kwaye yintoni eya kukuvumela Ndiza kukuxelela ukuba yintoni esemva kokucofa kwelanga kwi-Apple Watch.
Ngokufika kwe-watchOS 6 ngo-Epreli ka-2020, ukucofa kwelanga kwaqala, kodwa lo mxholo uthatha intsingiselo ephindwe kabini ngokufika kwentwasahlobo. Mhlawumbi uphakathi kwezigidi zabantu abaphethwe siSeasonal Affective Disorder (SAD). Ukufika kwentwasahlobo kuchaphazela kakubi imeko yethu yengqondo ngeempawu ezifanayo nezo zoxinzelelo olwaziwayo, kwaye eyona nto ilungileyo yonyango lwesi sifo sokwexeshana kukonwabela ukukhanya kwemini ngokupheleleyo.
1 Iinkcukacha zokudayela ilanga
2 Indlela yokuqonda ukusebenza kwendawo yelanga
Iinkcukacha zokudayela ilanga
Ubuso belanga be-Apple Watch bubandakanya ukucofa kunye neempawu ezili-12 kodwa oko kufundeka njengewotshi yeeyure ezingama-24. Kuyo, inxalenye yokudayela iya kuboniswa kwi-blue blue kunye nenye inxalenye ye-navy blue, kule meko indawo ekhanyisiweyo iya kuchaza ngqo iiyure zokukhanya kwelanga esiya kuzinandipha ngaloo mini ngokuxhomekeke kwindawo esikuyo, ke ngoko, indawo emnyama iya kubhekisa ngokuchanekileyo kwiiyure zasebusuku. Ngokwenene, umgca owahlula zombini imibala uya kubonisa ukuphuma nokutshona kwelanga.
Ngokwenxalenye yalo, ukucofa okuphawula ixesha kuya kulinganisa ukuba liLanga, ngendlela efanayo esiya kuba nenye indawo encinci yangaphakathi eya kusibonisa iwashi esemgangathweni, esinokuyenza ngokwezifiso ukuba siyayifuna kwifomathi ye-analog, okanye ukuba siyifuna ngefomathi yedijithali. Kwaye ekugqibeleni, zonke iikona zobuso (kuba i-Apple Watch iyiwotshi "esikwere") ziyafumaneka ukuba ungeze naziphi na iingxaki, kuba ezinye zazo ziya kuziqhelanisa necontour yendawo ekhethiweyo, njengesiqhelo.
Kwakhona, ukuba sikhetha i-subdial yedijithali, siya kunikwa isandla sesibini malunga nesiphawuli seyure, ukuze sibe nokuchaneka okuphezulu okunokwenzeka.
Ekugqibeleni, ukuba sicinezela i-sphere siya kunikwa ulwazi malunga nomzuzu ochanekileyo kumgangatho welanga esikulo, kunye iinkcukacha eziphathelele isimbuku seeyure zasemini esiya kuzinandipha.
Indlela yokuqonda ukusebenza kwendawo yelanga
Ngokucacileyo lonke olu lwazi kunye nemibala eyahlukeneyo ebonelelwa yi-solar sphere ye-Apple Watch yenzelwe okungaphezulu kokubona nje xa kusemini nasebusuku. Okokuqala, siza kuqala ngesiseko esinokutshabalalisa ingqondo yakho: Ngokwenyani, ukusa/ngokutshona kwelanga kuntsonkothile ngakumbi kunotshintsho phakathi kwemini nobusuku.. Enyanisweni, ixesha elichanekileyo liya kuxhomekeka kwi-utility ofuna ukuyinika ukuphuma kwelanga, kunye nendawo apho ukhoyo.
Ukwenza lula ukuqonda kwakho, Siza kusebenzisa igama elithi "ngorhatya", elingekho ngaphezulu okanye ngaphantsi kwezalathi zokukhanya zaphambi kokutshona kwelanga kunye nokusa. Oko kuthethiweyo, ukucofa kwelanga kwe-Apple Watch kusebenzisa i-shades ezintlanu ezahlukeneyo eziluhlaza ukumela ixesha lemini (okanye lobusuku) esizifumana sikulo, masiziqhawule ukusuka kobumnyama ukuya kokukhanya:
Umfanekiso: Solinruiz (kwiWikiPedia)
Busuku: Umbala omnyama wokucofa ngokulula kwaye ubonisa ubusuku obuvaliweyo.
ukukhanya kweenkwenkwezi: Lo mbala we-sphere, owesibini ubumnyama, uya kubonakalisa ukukhanya kweenkwenkwezi, oko kukuthi, xa iLanga liyi- <18º kwaye lisivumela ukuba sibone iinkwenkwezi zobukhulu besithandathu ngeso lenyama.
Nautical Twilight: Ngeli xesha iya kuboniswa xa iLanga <12º ngaphantsi kwe-horizon. Ukufika apha, iinkwenkwezi zobukhulu bokuqala kunye nesibini ziya kubonakala ngeso lenyama.
ukuhlwa kwabantu: Umbala we-penultimate uya kubonisa ukuba iLanga <6º ngaphantsi kwe-horizon kwaye ngoko ke, zombini iinkwenkwezi zokuqala kunye neeplanethi zingabonwa.
Usuku: Umbala okhanyayo wokudayela uya kubonakalisa iiyure zemini epheleleyo.
Nantsi indlela I-Apple inqume ukusebenza ngokuchaneka okungaqhelekanga kwiinkampani eziqhelekileyo, kodwa njengesiqhelo kwinkampani ye-Cupertino, i-sphere ethi, ngaphandle kwayo yonke into, iya kusetyenziswa kuphela njengomgaqo jikelele ngabathandi beenkwenkwezi. okanye kwiziphene zayo abo bafunde eli nqaku kwaye bagqibe ekubeni bathathwe yile sphere yelanga enomdla.
Naphezu kwayo yonke into, i-sphere enhle iyodwa, kwiitoni eziluhlaza ezinomdla kakhulu, nangona i-Apple igxininisa kumkhwa wayo wokunganikezeli iingxaki ngemibala yazo yendalo kuwo onke amacandelo, ndicinga ukuba ngenjongo yokugcina umlingo olu didi lwemigangatho ethile kuyilo ngalunye. Nokuba kusenokuba njalo, lixesha elifanelekileyo lokuba ulungelelanise indawo yakho yelanga kwi-Apple Watch, ngoku uya kuba nakho ukuncuma uncumo kuba sele usazi zonke ii-ins kunye nokuphuma kwayo, uyakwazi ukuyibona ngala mehlo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-intrahistory enomdla kwi-solar sphere ye-Apple Watch
I-Apple yabelana ngolungiso lwezaziso zabucala ezinempazamo nge-AirTags
Imibala emitsha yee-AirPods Max ngokufika kwe-AirPods Pro 2